Nanatrika ny Dubai izahay fingotra & plastika fampirantiana
ny mpitantana ny 18-07-23
Tamin'ny 2012, dia nanatrika ny Dubai fingotra & plastika fampirantiana nandritra ny enina andro. Nandritra izany fotoana izany, dia nifampiraharaha tamin'ny antitra maro mpanjifa sy nahazo ny hahafantatra mpanjifa vaovao maro.
dia nanatrika ny harena ankibon'ny tany orinasa Rosiana fampirantiana
Tamin'ny 2015, dia nanatrika ny fampirantiana orinasa Rosiana harena ankibon'ny tany, izay naharitra nandritra ny 5 andro. Nandritra izany fotoana izany, dia metmany mpanjifa vaovao ary nanao fanomanana fanokafana ny Rosiana tsena.
dia nanatrika ny orinasa Hanover fampirantiana tany Alemaina
Tamin'ny 2016, dia nanatrika ny orinasa Hanover fampirantiana tany Alemaina nandritra ny 5 andro. Nandritra izany fotoana izany, dia nahazo ny hahafantatra maro mpanjifa vaovao ary nanao fanomanana fanokafana ny tsena Eoropeana.